Nepalistudioनिन्द्रा लागेन ? राम्रोसँग निदाउन यस्तो खानुहाेस् - Nepalistudio
निन्द्रा लागेन ? राम्रोसँग निदाउन यस्तो खानुहाेस्
राम्रोसँग निदाउन कस्तो खाने ?
गुलियो खानेकुराः गुलियो खानेकुराले हाम्रो निन्द्रालाई नकरात्मक अशर गर्छ । त्यही भएर प्राय महिलाले आफ्ना नानी बाबुलाई सुत्नु अगाडि गुलियो खानेकुरा, क्यान्डी तथा चकलेट खान दिँदैनन्। चिनिलाई शरिरले सजिलै गलाइदिन्छ जसका कारण ब्लड ग्लुकोजको तहमा उतारचढाब ल्याइदिन्छ । फस्वरुप तपाईलाई निन्द्राबाट बञ्चित गर्छ ।
फास्ट फुडः प्रायजसो प्याकेटमा उपलब्ध हुने फास्ट फुड तपाईको निन्द्राका शत्रु नै हुन् । चिल्ला, कार्बोहाइड्रेडयुक्त, सन्तृप्त फ्याट र सोडियमको मात्रा उच्च भएका खानेकुराले रातको निदलाई नकरात्मक असर गर्छ ।
मदिराः मदिराले गहिरो निन्द्रा लाग्नुका साथै घुर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । नशाको सुरुमा केही समय गहिरो निन्द्रा लागे पनि केही समयपछि अनिन्द्रा बढ्नुका साथै दिउसभर आँखा झुल्छ।
प्रकाशित मिति :- २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार ००:३४